Hoggaamiyayaasha Muslimiinta Kenya oo dowladda ka dalbaday in ka falceliso afduubka Cabdiwahaab Shiikh | Somsoon
Home WARAR Hoggaamiyayaasha Muslimiinta Kenya oo dowladda ka dalbaday in ka falceliso afduubka Cabdiwahaab...
laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa Isniintii ku hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan Xoghayaha Golaha Wasiirrada Arrimaha Gudaha (CS) Dr. Fred Matiang’i iyo taliyaha Guud ee Booliiska Hillary Mutyambai haddii aysan si cad u sharraxin afduubka loo geystay Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
ⓘXildhibaanka laga soo doorto Mvita Abdulswamad Nassir iyo senetarka Mombasa Mohamed Faki ayaa sidoo kale doonaya in labada masuul ay sharxaan kiisaskii ugu dambeeyay ee lagu laayay dadka Kenyanka ah maadaama laamaha amniga dalka ay aamusan yihiin.
“Waxaan qorsheyneynaa inaan horgeynno mooshin wadajir ah baarlamaanka iyo Senate -ka toddobaadkan, sidaa darteed xoghayaha arrimaha Gudaha Fred Matiang’i, madaxa baarista dambiyada, George Kinoti iyo taliyaha guud ee Booliska Hillary Mutyambai, waxaan ka rabnaa inay iftiimiyaan sababta ay waxaas oo dhan u dhacayaan,” ayuu yiri xildhibaan Abdulswamad Nassir.
Article horeMaraykanka oo sheegay in Khatar ugu imaan karto dalal ay ka mid tahay Somalia
Article socoda Xog: Qaabkee Fahad Yaasiin looga furdaamiyay xanibaadii Jabuuti?
Talyaaniga:-Nin soomaali ah oo weerar ku dhaawacay 5 qof.